🍒 (@babe_taebear)'s conversations - Wattpad
Honestly I'm surprise about 4K thingy xD well what do u want as updates?
@babe_taebear special class
@babe_taebear impossible (✿◠‿◠)
@babe_taebear BTS horror collection !!
သာသာရေ My Precious Omega& My Alpha
နောက်ပိုင်းကလေUni မပါတော့ဘူး uni Updateပေးပါအုံးနော်
Author nim i have started reading your stories and i freaking want them in english your storyline are soo good i'am not saying that can you translate your books for mee butt if somedayy you have idea of writing or translatingastory in englishh then please doo itt.....
AND LASTLY YOUR STORIES ARE A BOOP ❤️❤️
သာသာရေMy annoying neighbour ရယ် My alphaရယ် uniလေးရေးပေးပါအုန်း ဖတ်ချင်လို့ပါ
I miss you ╥╥
သာသာရေ My Alpha လေး Uniလည်းမရဘူးကော ဖတ်ခြင်လွန်းလို့ ပြန်ရေးပေးပါဦးရှင့်
@SandarOo1  ဟုတယ် My Precious Omega လည်း uniမပါဘူး( ≧Д≦)( ≧Д≦)သာသာရေ လုပ်ပါအုန်း (༎ຶ ෴ ༎ຶ)(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
My annoying neighbour book လေးမှာလို့ရသေးလား ဟင်sis
Stuck in the hell s2 pls
@babe_taebear i waiting
@DawNanSuSuHtwe May be soon ><
unnie ရေ private cb မာပြောထားတာ rp လည်းမပြန်လို့  My precious Omega ရယ် My Alpha လေးရယ်နဲ့My Annoying Neightbour လေးတွေကိုလေ Uni လေးထည့်ပေးပါဟားဟင် အရမ်းဖတ်ချက်တာ RL ထဲထည့်ထားတာကြပီ ဖတ်မယ်လုပ်တော့ zawgyi ဘဲပါတာ MPO လေးကအရှေ့ပိုင်းဘဲ uni ပါတယ် နော် အားရင် လုပ်ပေးပါနော် အရမ်းဖတ်ချင်နေလို့ပါနော် နော် အားးးးးးး၀ါးးးးးးunnie
@babe_taebear ဟီးးးးဟုတ် မျှော်နေတာ ကျေးဇူးပါ unnieရေ( ꈍᴗꈍ)( ꈍᴗꈍ)꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
@MayThutaKywe ဟုတ် ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော် <3
သာသာ ေရ speical class ေလး up ေပးပါအံုးေနာ္
@SuSandar559 may be soon TT
အမ​ရေ precious omega ​လေးကို unicode​လေးပြန်up​ပေးပါအုန်း​နော်  တစ်ဝက်နဲ့ညီမတန်းလန်းကြီးဖြစ်​နေလို့ပါ အရမ်း​ကောင်းလွန်းလို့ဆက်မဖတ်ဘဲနဲ့မ​​နေနိုင်လိူ့ကာအမ​ရေ ညီမကzawgyiနဲ့လုံးဝမဖတ်တတ်လို့ပါအမရယ်